N'ihi na ụfọdụ iPhone ọrụ, ọ bụ ezigbo mfe gbakwunye foto iPhone. Otú ọ dị, ụfọdụ ndị ọhụrụ iPhone ọrụ adịghị maara otú gbakwunye foto iPhone. E nwere ọtụtụ ụzọ anyị nwere ike mbubata iPhone foto site na PC. Ma akpa anyị na-aga na-atụle na otú anyị nwere ike tinye foto iPhone na iTunes.
Tinye foto site na kọmputa na-iPhone iji iTunes
Mgbe anyị na-ekwu okwu banyere ibuga anyị foto site na anyị PC ka iPhone na iTunes mbụ na a ga-mere bụ, gị iPhone ga-ejikọrịrị gị PC site na data USB. Mgbe eme otú nnọọ na-aga n'ihu na ẹkedori iTunes na mgbe ahụ na-agụ na soro ntuziaka nyere n'okpuru.
Gị PC, ike a na nchekwa na foto na ị họrọ maka ebufe.
Ugbu a ọzọ, na iTunes aga na pịa ngwaọrụ aha na-egosi, na mgbe ahụ na nri panel a ga-enwe Photo taabụ. ịgbanwee na.
Họrọ nchekwa nke i kere na akpa ebe.
Ihe ikpeazụ na i nwere ime bụ, akpali gị cursor ka Mee button na iti ya, ọ ga-amalite idetuo foto site na gị na kọmputa na gị iPhone
A bụ ihe a bụghị nanị usoro na ike ji nyefee foto ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ dị mkpa data site na PC gị na-iPhone. Ebe anyị na-aga na-atụle na ọzọ usoro na ike inyere mmadụ aka tinye photos mfe ka ya iPhone si onye Computer enweghị iTunes.
Tinye Photos ka iPhone site na kọmputa na-enweghị iTunes
The software-eji gbakwunye foto iPhone site na kọmputa na-enweghị iTunes bụ Wondershare TunesGo. Ọ bụ otu nnukwu ngwá ọrụ na-enyere ndị ọrụ na-etinye photos, songs, videos, na ndị ọzọ si na kọmputa na-iPhone. N'okpuru ebe a bụ nzọụkwụ nke otú iji ya.
Nzọụkwụ 1. Download na wụnye Wondershare TunesGo na kọmputa gị. Ẹkedori ya na jikọọ na gị iPhone gị na kọmputa site na eriri USB. Mgbe ahụ, ị pụrụ ịhụ software na-achọpụta rụọ ekwentị gị na akpaghị aka.
Nzọụkwụ 2. Click Photos na ekpe sidebar. Na mgbe ahụ, ị pụrụ ịhụ na e nwere onye Add bọtịnụ. Pịa ya na-agagharị na photos na kọmputa gị. Họrọ chọrọ ndị na pịa OK na-etinye ha gị iPhone.
1.How na-elele iPhone nchekwa
N'ezie, ihe a na-eme ka ọtụtụ ndị ọrụ na-echegbu onwe. Mgbe ị na-banyere-a foto, ma ọ bụ na ị dị nnọọ hụrụ a video na ị ga-n'anya ibudata, ma ọ bụ ngwa na i chere ga-enyere gị aka n'ụzọ ụfọdụ, a ozi na-egosi "ngwaọrụ adịghị nwere zuru ezu ohere". Ugbu a ihe a bụ nnọọ obere yiri ka eme ma ọ bụrụ a mmadụ na-eme ego ya ekwentị na ebe nchekwa. Ajụjụ bụ otú ego ebe nchekwa nke gị iPhone?
Iji hụ nchekwa dị na gị iPhone:
Nzọụkwụ 1. Mbụ niile ẹkedori Isetịpụ App na pịa General.
Nzọụkwụ 2. Ugbu a aga n'ihu ma na enweta "ojiji" ma nọgide na-scrolling ala. Enweta ojiji ka lelee Mmanu na dị nchekwa.
Lekwa ya. Nke a bụ otú ị nwere ike ịlele ọnọdụ nke dịnụ ohere hapụrụ na gị iPhone. Ịlele maka ohere enweghị usoro pụrụ n'ezie ịzọpụta gị a otutu isi ọwụwa na oge.
2.How iji nweta ihe ohere maka iPhone
Ka site ugbu a, anyị maara otú ego dịnụ ohere na anyị iPhone, na-esote nnukwu ajụjụ bụ, ọ bụrụ na ohere bụ ala, ga-esi ọzọ ohere maka gị iPhone.
1). Ihe mbụ mbụ. Ị kwesịrị ị na nkwado ndabere na mpaghara photos, videos na songs na ị chọrọ ịnọgide na ma ịdị iji na gị iPhone gị na kọmputa. Na mgbe ahụ ebe ọ bụ na ị nwere nkwado ndabere na mpaghara, ị nwere ike wepụ ha si gị iPhone. Nke a n'ezie na-azọpụta ohere maka iPhone.
2). Mgbe ihichapụ faịlụ, n'ihi na n'aka, ọzọ ohere ga-abụ dị. Otú ọ dị, n'ezie, na-ehichapụ faịlụ na-agaghị ozugbo mgbe nhichapụ. Ha na-adị ebe gị iPhone, ma apụghị ịhụ anya. Iji wepụ ha si gị iPhone na-adịgide adịgide, ị nwere ike na-agbalị Wondershare SafeEraser wepụ ehichapụ faịlụ na gị iPhone.
Download Wondershare SafeEraser free ikpe mbipute ugbu a!
3). Bibie nke junk faịlụ na kuki. Mgbe ọ bụla ị na-eji gị iPhone, junk faịlụ na kuki na-nọ site. Ị nwekwara ike gbalịa 1-Pịa nzacha na mkpocha na Wondershare SafeEraser wepụ ha niile.
> Resource> iPhone> 2 Ụzọ Tinye Photos ka iPhone na Atụmatụ Ịlụ More Space maka iPhone